အမရပူရနန်းတော် - ဝီကီပီးဒီးယား
ကုန်းဘောင်မင်းဆက်၏ နန်းတော်များထဲမှ နန်းတော်တစ်ခု
အမရပူရနန်းတော် သည် မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်းဘောင်ခေတ်၏ မြို့တော်ဟောင်း အမရပူရမြို့တော်၏ နန်းတော်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၁၈ ရာစုနှောင်းပိုင်းနှင့် ၁၉ ရာစုအစောပိုင်းတွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ မြို့တော်ကို မန္တလေးသို့ ရွေ့ပြောင်းပြီးနောက် ယနေ့အချိန်အထိ နန်းတော်ရာ တစ်ခုအနေဖြင့်သာ ကျန်ရစ်သည်။
နန်းတော်ကို သာယာဝတီမင်းမှ ၁၈၃၈ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၁၈၅၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီတွင် မင်းတုန်းမင်းမှ နောင်တော်ဖြစ်သူ ပုဂံမင်းထံမှ ထီးနန်းကို လွှဲပြောင်းရယူပြီးနောက် နန်းတော်ကို မန္တလေးမြို့သို့ ပြောင်းရွေ့ခဲ့သည်။
ယနေ့အချိန်တွင် အမရပူရနန်းတော်ရာ၌ ထင်ရှားစွာ တည်ရှိနေသေးသော အဆောက်အအုံများအနက် ဘိုးတော်ဘုရား၏ ပြာသာဒ်ဂူ၊ ဘကြီးတော်ဘုရား၏ ပြာသာဒ်ဂူ၊ ကုန်းဘောင်မင်း၏ ပြာသာဒ်ဂူများလည်း ပါဝင်သည်။
↑ "Mandalay Palace." Encyclopedia of Modern Asia. Charles Scribner's Sons. 2002. Retrieved August 13, 2012 from HighBeam Research(subscription required): http://www.highbeam.com/doc/1G2-3403701858.html[လင့်ခ်သေ]
Wikimedia Commons ရှိ အမရပူရနန်းတော် နှင့်ပတ်သက်သော မီဒီယာများ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အမရပူရနန်းတော်&oldid=627116" မှ ရယူရန်
၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၁:၅၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၁:၅၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။